Nchịkwa - Magnesium L-Threonate Mmeju: Uru, Ọgwụ
Mbido > Magnesium L-Threonate Mmeju
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịdị mma Magnesium L-Threonate emeju, anyị na-akwado ịzụrụ Magnesium Threonate ntụ ntụ si Cofttek. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ọ na-eme ka bioavailability nke magnesium dịrị ahụ n'ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwukwa na ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-akwado ọrụ ebe nchekwa ma na-eme ka arụ ọrụ zuru ezu. Ha na-enyere ndị ọrụ aka ihi ụra nke ọma. Cofttek bu Anandamide (AEA) bu ndi na-ere ahia gi ngwaahịa.
Threonic acid bụ mmiri nwere ike ịnweta mmiri nke sitere na mmebi metabolic nke Vitamin C. Mgbe acid threonic jikọtara ya na magnesium, ọ na-etolite nnu a na-akpọ Magnesium L-threonate. Magnesium L-threonate dị mfe etinye obi gị dum na ahụ ma si otú a, bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji mee magnesium iru ụbụrụ ụbụrụ na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ. Magnesium nke Magnesium L-threonate nyere na-eje ozi ọtụtụ ọrụ dị mkpa nke biochemical, gụnyere ịmalite nke vitamin B, ịmịnye insulin, nhazi ATP na protein na usoro acid. Mineral na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime ka ọrụ kwesịrị ekwesị nke ọtụtụ enzymes. Nke kachasị mkpa, ọ na - eme ka ọrụ sistemu na - arụ ọrụ site na ịba ụba mgbochi nje na mgbochi akpụ nke mkpụrụ ndụ na-egbu egbu na cytotoxic T-lymphocytes.
Dịka e kwuru na mbụ, a pụrụ inweta magnesium site n'ọtụtụ nri dị iche iche na mineral. Fọdụ nri nwere magnesium n'ọtụtụ dị elu bụ chocolate chocolate, avocados, akụ, mkpo, tofu, ugu na chia mkpụrụ, azụ mara abụba, wdg. Otú ọ dị, magnesium nke enyere site na isi mmalite anaghị ezu iji kwado ọrụ dị iche iche biochemical na ya bụ, ya mere, na ịchọrọ maka mgbakwunye Magnesium L-threonate amụbawo nke ukwuu na afọ ole na ole gara aga.
Kedu ihe eji magnesium L Threonate mee?
Magzụta Magnesium L-Threonate bụ maka uru ya nootropic. Ọ na-eme ka ebe nchekwa episodic, mmụta, na ime ka uche dịkwuo elu. Ihe mgbakwunye ahụ bụ ọgwụ ọgwụ edere nye ndị ọrịa na-arịa ọrịa ncheta afọ, ADHD, mgbaka, na ọrịa Alzheimer.
The isi urusnke Magnesium L-Threonate bụ mmụba na ebe nchekwa. Ọ na-enwe ike ịkwalite njupụta synaptic na plasticity yana ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke saịtị ntọhapụ neurotransmitter n'ime ụbụrụ.
Ihe mgbakwunye a nwekwara ike melite ebe nchekwa gbasara ohere. N'ime otu ọmụmụ oke, ncheta ọrụ na-eme ka 13% dịkwuo mma mgbe ụbọchị 24 gasịrị na-ewere Magneisum L-Threonate. Mgbe ụbọchị 30 nke mgbakwunye, ụmụ agadi nwere ike ịrụ ọrụ n'otu ọkwa dị ka ndị ogbo ha.
Nke a pụtara na ọ bụ ezie na mgbakwunye a nwere ike ịkwalite ọrụ nghọta na ndị ntorobịa na ndị agadi, ọ kawanye mma maka ndị agadi. N'ezie, ụmụ oke nká hụrụ ọganihu nke 19%, nke dị mkpa ma e jiri ya tụnyere 13% mmụba nke ụmụ oke. Nyere na ndị agadi nwere ike ịnwe ncheta ncheta, mgbakwunye a na-emetụta ndị agadi.
Magnesium Threonate ọ ka mma?
Magnesium L-threonate nwere ike ịbụ ezigbo ụdị magnesium maka gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwalite ahụike ụbụrụ ọkachasị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịkwalite ọkwa magnesium n'akụkụ niile nke ahụ, mmetụta nwere ike ịdị ike karịa n'ụbụrụ na ụdị nke magnesium.
Magnesium Glycinate ọ ka mma karịa magnesium citrate?
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụdị nke magnesium dị, anyị na-ahọrọkarị iji citrate magnesium na / ma ọ bụ magnesium glycinate. Magnesium citrate kachasị enye aka maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na afọ ntachi, ebe ụdị glycinate bara uru maka ọnọdụ dịka nchekasị, ehighị ụra nke ọma, nrụgide na-adịghị ala ala, na ọnọdụ mkpali.
Kedu ọgwụ ndị ị na-ekwesịghị iji magnesium?
Iwere magnesium na ọgwụ ndị a nwere ike ime ka ọbara mgbali elu dị ala. Fọdụ n'ime ọgwụ ndị a gụnyere nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), na ndị ọzọ.
Magnesium ọ na-eme poop?
Stool Softener: Magnesium na-adọta mmiri n'ime eriri afọ, na-arụ ọrụ dị ka osmotic laxative. Mmụba a na mmiri na-akpali eriri afọ. Ọ na-emekwa ka ọ dị nro na-abawanye ma na-abawanye oke nke stool, na-ebute eriri afọ ma na-enye aka mee ka stool dị mfe ịgafe.
Igo mg ole nke magnesium L Threonate ka m kwesiri iri?
Magnesium L-threonate bụ ọgwụ ọnụ ma enwere ike ị eitherụ ya n'ụdị mbadamba ma ọ bụ ntụ. Ngwọta ziri ezi nke Magnesium L-threonate ma ọ bụ ọgwụ na-adabere na afọ na ahụike nke onye na-ewere ya yana ebumnuche eji ewere ọgwụ ahụ. N'ozuzu, a na-atụ aro ụmụ nwanyị nọ n'agbata 19 na 30 ka ha rapara na usoro 310 mg kwa ụbọchị ma ụmụ nwoke nọ n'otu ọgbọ ga-arapara na usoro ọgwụ nke 400 mg kwa ụbọchị. Mụ nwoke meworo agadi nwere ike ịbawanye ọgwụ ha na 420 mg kwa ụbọchị na ụmụ nwanyị nọ n'afọ ahụ kwesịrị iri 360 mg nke Magnesium L-threonate kwa ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma. Womenmụ nwanyị na-enye ara ara nwekwara ike iri ọgwụ a. Otú ọ dị, ha kwesịrị idobe ọgwụ kwa ụbọchị nke Magnesium L-threonate na-erughị 320 mg kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-ewere Magnesium L-threonate maka ọnọdụ akọwapụtara nke ọma, ị ga-emegharị ọgwụ gị dabere na ebumnuche a na-ewere ọgwụ ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ị na-ewere Magnesium L-threonate maka nsogbu metụtara nri, a na-atụ aro ka ị were 400-1200 mg kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-ewere mgbakwunye ahụ iji bulie ọrụ ọgụgụ isi, ị ga-eri 1000 mg nke Magnesium L-threonate kwa ụbọchị. Maka ezigbo ụra, 400-420 mg nke Magnesium L-threonate ezuru ụmụ nwoke na 310 ruo 360 mg ezuru ụmụ nwanyị.
Kedu Magnesium kachasị mma maka nchegbu?
A na - ejikarị ihe ndị ọzọ na - eme magnesium eme ihe ka ọ dịrị ya mfe ịmịkọrọ ya. A na-ahazi ụdị magnesium dị iche iche dịka ihe ndị a na-ejikọ. Differentdị magnesium dị iche iche gụnyere:
Magnesium glycinate. A na-ejikarị ya eme ihe mgbu mgbu.
Mmiri magnesium. A na-ejikarị agwọ migraines na afọ ntachi.
Magnesium citrate. Mkpụrụ obi na-etinye obi gị ngwa ngwa ma na-ejikwa afọ ntachi.
Magnesium chloride. Ahụ na-adị mfe. Nkechi
Sulfate magnesium (nnu Epsom). N'ozuzu, ọ na-adịchaghị mfe itinye aka n'ime ahụ ma ọ nwere ike itinye ya n'ime akpụkpọ ahụ.
Lactate magnesium. A na-ejikarị ya dị ka ihe mgbakwunye nri.
Dika nyocha nke 2017 nke ihe omumu, otutu ihe omumu di nkpa banyere magnesium na nchegbu na-eji magnesium lactate ma obu magnesium oxide. Magnesium glycinate na-adị mfe etinye obi gị dum ma ọ nwere ike ịdị jụụ. O nwere ike inye aka belata nchegbu, ịda mba, nrụgide, na ehighị ụra nke ọma. N'agbanyeghị nke ahụ, nchọpụta sayensị banyere ojiji ndị a pere ezigbo mpe, ya mere achọrọkwu ọmụmụ ihe. A na-ejikarị magnesium glycinate eme ihe maka mmetụta dị jụụ ya na-emeso nchekasị, ịda mbà n'obi, na ehighị ụra nke ọma.
Nwere ike magnesium na - enyere ụbụrụ ụbụrụ aka?
A na-akpọkarị ụfụ ụbụrụ, ụbụrụ na-amaghị ihe ma ọ bụ nsogbu na itinye uche na ebe nchekwa nwere ike igosi ụkọ magnesium. Magnesium bụ ihe dị mkpa maka ụbụrụ, yabụ na-enweghị ya ụbụrụ enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Magnesium ọ na-agwọ ụbụrụ?
Magnesium na-arụ ọrụ dị ka onye nche ọnụ ụzọ maka ndị na-anabata NMDA, bụ ndị na-etinye aka na ụbụrụ ụbụrụ dị mma, ncheta na mmụta. Ọ na - egbochi mkpụrụ ndụ akwara ịba ụba, nke nwere ike igbu ha ma nwee ike imebi ụbụrụ.
Ndi magnesium na-akpata mgbaka?
Nnyocha ọhụrụ e bipụtara na magazin Neurology na-atụ aro na ma magnesium dị elu ma dị oke ala nwere ike itinye ndị mmadụ n'ihe egwu nke ịrịa ọrịa isi mgbaka.
Magnesium L Threonate ọ dị mma maka ọbara mgbali elu?
Typedị magnesium a nwere ike banye n'ọbara ma gabiga ihe mgbochi ụbụrụ ụbụrụ gị, mkpụrụ ndụ na-etinye obi ya ngwa ngwa ma nwapụta obere ọbara mgbali ma bụrụkwa mgbochi ọrịa.
Kedu ihe magnesium kacha mma ị na-ewere kwa ụbọchị?
Magnesium citrate bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị magnesium formulations na nwere ike mfe zụrụ online ma ọ bụ na-echekwa n'ụwa nile. Researchfọdụ nnyocha na-enye echiche na ụdị a bụ otu n'ime ụdị magnesium kachasị dị ndụ, nke pụtara na ọ na-adị mfe itinye uche na akụkụ nri gị karịa ụdị ndị ọzọ.
Kedu ihe dị iche na magnesium citrate na magnesium gluconate?
Magnesium citrate kachasị enye aka maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na afọ ntachi, ebe ụdị glycinate bara uru maka ọnọdụ dịka nchekasị, ehighị ụra nke ọma, nrụgide na-adịghị ala ala, na ọnọdụ mkpali.
Kedu Magnesium kachasị mma maka ahụ ike?
magnesium citrate nwere ike ịbụ ụdị kachasị dị irè ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale mgbakwunye. Y’oburu n’inweghi ego nke magnesium, enwere ike rite uru ndi ozo site n’inwe nri gi nke oma. Na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ dị maka mgbochi ụkwụ nke nwere ike inye aka.
Magnesium ọ dị mma maka nchekasị?
Nnyocha na-egosi na ị na-ewere magnesium maka nchegbu nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Nnyocha achọpụtawo na mmetụta nke ụjọ na ụjọ nwere ike belata nke ukwuu na ịba ụba magnesium, ozi ọma ahụ bụ na nsonaazụ ya ejedebeghị na nsogbu nchegbu zuru oke.
Kedu Magnesium kacha mma maka ihi ụra?
A na-ejikarị glycinate magnesium eme ihe dị ka ihe mgbakwunye nri na-edozi onwe ya iji melite ụra ma na-emeso ọnọdụ dị iche iche na-adịghị mma, gụnyere ọrịa obi na ọrịa shuga. Magnesium glycinate na-adị mfe etinye obi gị dum ma ọ nwere ike ịdị jụụ. O nwere ike inye aka belata nchegbu, ịda mba, nrụgide, na ehighị ụra nke ọma.
Kedu ihe oriri dị elu na magnesium?
Ewezuga iwere Magnesium L-threonate iji mee ka ogo magnesium dị n'ụbụrụ gị, ị nwekwara ike iri uru nke nri ndị bara ọgaranya na mineral ndị a. Ihe oriri ndị a nwere ike inyere gị aka inweta ọkwa magnesium dị gị mkpa ma nwee ọ theụ uru niile ị na-enweta. Lee ụfọdụ n'ime ha Magnesium L-threonate nri;
Ọchịchịrị Chocolate - dịka ọ dị ụtọ ma dịkwa mma, ọ na-ebu 64mg nke magnesium nke bụ 16% nke RDI. E wezụga nke ahụ, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị juputara na ọla kọpa, ígwè, na manganese yana eriri prebiotic.
Avocados– mkpụrụ osisi a na-atọ ụtọ ma na-edozi ahụ nwere ike inye gị 58mg nke magnesium nke bụ ihe dịka 15% nke RDI. Mkpụrụ osisi ahụ nwekwara vitamin B, K, na isi iyi nke potassium.
Nutsare– nke a makwaara bụ otu n’ime ezigbo ihe ndị sitere na Magnesium L-threonate. 1-ounce serving cashews nwere magnesium 82mg nke bụ 20% nke RDI.
Legumessuch– dị ka peas, lentil, chickpeas, na soya agwa bara ọgaranya na mineral dị iche iche, gụnyere magnesium. Dịka ọmụmaatụ, otu iko nke esiri esi nri nwere 120mg nke magnesium, nke ahụ bụ 30% nke RDI.
Kedu ihe mmetụta dị ogologo oge ị na-ewere magnesium?
Magnesium bụ ihe na-edozi ahụ nke kwesịrị ka ahụ dịrị gị mma. Iwere Magnesium ruo ogologo oge dị mkpa maka ọtụtụ usoro n'ime ahụ, gụnyere ịhazi ọrụ ahụ ike na akwara, ọkwa shuga dị n'ọbara, na ọbara mgbali na ime protein, ọkpụkpụ, na DNA.
Niile magnesium ọ na - akpata afọ ọsịsa?
Dị nke magnesium a na-akọkarị na ọ na-akpata ọrịa afọ ọsịsa gụnyere magnesium carbonate, chloride, gluconate, na oxide. Mmetụta afọ na laxative nke salts magnesium bụ n'ihi ọrụ osmotic nke salts na-adịghị edozi na eriri afọ na eriri afọ na mkpali nke mmegharị afọ.
Ogologo oge ole magnesium L Threonate na-arụ ọrụ?
Egosiputala MgT n'olu ka o were ma ọ dịkarịa ala otu ọnwa iji bulie ogo magnesium ụbụrụ ruo n'ókè achọrọ iji nwee mmetụta na nhazi ebe nchekwa.
Magnesium ọ na - akpata Alzheimer?
Inwe ọkwa magnesium nke dị elu ma ọ bụ dị ala nwere ike itinye gị n'ihe ize ndụ maka Alzheimer na nsogbu ndị ọzọ, ndị ọrụ nyocha Dutch na-akọ.
Kedu ihe mgbaàmà nke obere magnesium?
Mgbe ọkwa nke magnesium na ahụ na-agbada n'okpuru nkịtị, mgbaàmà na-etolite n'ihi obere magnesium. Ihe ndị na-akpatakarị ala magnesium gụnyere:
Ịṅụ mmanya na-aba n'anya
Ọkụ ọkụ na-emetụta akụkụ buru ibu nke ahụ
Ọrịa afọ ọsịsa
Mgbaasị oke (polyuria), dị ka ọrịa shuga a na-achịkwaghị achịkwa na n'oge mgbake site na nnukwu akụrụ akụrụ
Hyperaldosteronism (nsogbu nke adrenal gland na-ewepụta ọtụtụ hormone aldosterone n'ime ọbara)
Akụrụ tubule ọrịa
Malabsorption syndromes, dị ka ọrịa celiac na ọrịa obi na-afụ ụfụ
Ahụ erighị ihe na-edozi ahụ
Ọgwụ gụnyere amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, proton pump inhibitors, na ọgwụ aminoglycoside
Pancreatitis (ọzịza na mbufụt nke pancreas)
Nnu vitamin D ha enwere ike igbochi Alzheimer?
Ihe nyocha anụmanụ na in vitro na-egosi na vitamin D nwere ikike ọgwụgwọ maka igbochi na ọgwụgwọ nkụda mmụọ na mgbaka. Abụọ na-adịbeghị anya ọmụmụ na-atụ aro na ala 25 (OH) D etoju dịkwuo ize ndụ nke ọkpụrụkpụ cognitive ojuju.
Kedu Magnesium kachasị mma maka irighiri akwara?
Onye nrụpụta ahụ na-ekwu na mgbakwunye magnesium na-enyere aka ịlụ ọgụ mgbu, melite ogo ụra, ma belata nchekasị na nrụgide. Ha kọwakwara na ụdị magnesium a (magnesium bisglycinate) dị nro karịa afọ ndị ọzọ nke ịnweta.
Ọ ka mma iji magnesium n'ụtụtụ ma ọ bụ n'abalị?
Enwere ike ịmịnye ihe mgbakwunye magnesium n'oge ọ bụla n'ụbọchị, ọ bụrụhaala na ị nwere ike iwere ha oge niile. Maka ụfọdụ, ị supụ ihe mgbakwunye na ụtụtụ nwere ike ịdị mfe, ebe ndị ọzọ nwere ike ịchọpụta na ịnara ha nri abalị ma ọ bụ tupu ịrahụ ụra na-arụ ọrụ nke ọma maka ha.
Magnesium ọ dị mma maka akwara azụ azụ?
Magnesium - ihe dị mkpa ịnweta maka ụjọ sistemụ ahụ ike na ibelata mbufụt.
E gosipụtara ihe mgbakwunye Magnesium (Mg) iji meziwanye mgbake ọrụ na ọrịa dị iche iche dị iche iche. Enwetabeghị uru dị mkpa nke Mg supplementation na ọrịa akwara akụkụ.
Nwere ike magnesium nwere ike inye aka maa jijiji?
Ihe ịrịba ama ndị a na-ahụkarị nke enweghị magnesium gụnyere mkpịsị akwara, ịma jijiji na ntachi. Agbanyeghị, mgbakwunye enweghị ike ibelata mgbaàmà ndị a na ndị na-ezughi oke.
Magnesium ọ dị mma maka ọrịa Parkinson?
Ihe omumu nke mbu nke ndi Parkinson achoputara na Magnesium nwere ike iru iru ugha nke ugbo ala, ihe ojoo
Kedu ihe bụ akara nke magnesium dị ala n’ahụ?
Ihe omuma mbu nke ala magnesium gunyere:
Dika ezughi magnesium na-akawanye njọ, ihe mgbaàmà nwere ike ịgụnye:
àgwà mmadụ gbanwere
ụdị mkpụrụ obi na-adịghị mma
Ndi turmeric na enyere aka oria mmadu?
N'ime nnyocha e bipụtara na Medicine na ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ndị nchọpụta chọpụtara na turmeric nwere ike ichebe usoro ụjọ ahụ site na nsị ndị metụtara ịkpata usoro ụjọ ahụ na ọrịa Parkinson.
Mgbanwe ọgwụ, ọrịa, akpịrị ịkpọ nkụ, ụra ụra, ịwa ahụ n'oge na-adịbeghị anya, nchekasị, ma ọ bụ nsogbu ahụike ndị ọzọ nwere ike njọ mgbaàmà PD. Urinary tract infections (ọbụlagodi n’enweghị mgbaàmà nke eriri afo) bụkarị ihe kpatara ya. NDMỌD:: medicationsfọdụ ọgwụ nwere ike ime ka mgbaàmà PD ka njọ.
Magnesium ọ na-emetụta ebe nchekwa?
Nnyocha ọhụrụ na-egosi na ịbawanye nri magnesium, ihe dị mkpa dị mkpa nke a hụrụ na akwụkwọ nri akwụkwọ na mkpụrụ osisi, agwa, na mkpụrụ, nwere ike inye aka ịlụ ọgụ na ncheta ncheta metụtara ịka nká.
Ndi magnesium na enyere aka na ikuku oxygen?
Otu n'ime ọrụ ya dị mkpa karị bụ inye aka wulite ntachi obi site na ịbawanye ikike ikuku oxygen. Mana ọ na - enyere aka na: Healthy blood pressure.
Ndi magnesium na-eme serotonin?
Nnyocha na-egosi na ịgbakwunye na magnesium nwere ike inyere aka ịbawanye ogo serotonin. N’ezie, a hụla ọkwa serotonin dị ala n’etiti ndị ọrịa nwere ụkọ magnesium. Nnyocha ahụ nke kwurịtara banyere ịzụlite serotonin na magnesium kọrọ ihe ịga nke ọma.
Magnesium ọ na-enye ike?
Magnesium na-arụ ọtụtụ ọrụ dị oke mkpa n'ime ahụ, dị ka ịkwado ọrụ ahụ ike na akwara na mmepụta ume. Obere ogo magnesium anaghị ebute ihe mgbaàmà na obere oge. Agbanyeghị, obere ogo oge dị elu nwere ike ime ka ohere mgbali elu, ọrịa obi, ụdị ọrịa shuga abụọ na osteoporosis mụbaa.
Gịnị bụ ihe kasị mma magnesium L Threonate?
Nkịtị dị mkpa dị jụụ.
UGBU A Foods Magnesium Citrate Veg Capsules.
Vitafusion Vitamin Gummy.
Mgbatị ndụ Neuro-Mag Magneium L-Threonate.
Ọgwụ kacha mma kacha mma Dọkịta 100% Chelated Magnesium Mbadamba.
Gini mere magnesium glycinate ji ka nma?
Egosiputa Magnesium glycinate nwere otutu uru di iche iche, gunyere ihe ndia: O nwere ihe na-eme ka obi di uto n’elu ụbụrụ gi n’ihi onodu glycine. O nwere ike inye aka belata nchegbu ma kwalite ụra ka mma. Ọ na - enyere aka ime ka ọkpụkpụ sie ike site n’igide ogo ọkpụkpụ dị mma.
Magnesium Glycinate ọ̀ bụ otu ihe ahụ dị ka magnesium?
Enwere ọtụtụ ụdị nke magnesium dị, anyị na-ahọrọkarị iji citrate magnesium na / ma ọ bụ magnesium glycinate. Dị magnesium glycinate bara uru maka ọnọdụ dịka nchekasị, ehighị ụra nke ọma, nrụgide na-adịghị ala ala, na ọnọdụ mkpali.
Magnesium Glycinate ọ na - enyere gị aka nsị?
Magnesium glycinate bụ nnukwu ụdị magnesium ọzọ maka ụra. Ọ bụ ụdị magnesium kachasị mma, ma dị nwayọọ na afọ, yabụ o yikarịrị ka ọ ga-enwe mmetụta laxative ma ọ bụ iwe iwe afọ.
Gịnị ka magnesium glycinate ji agwọ?
Ọgwụ a bụ ihe mgbakwunye ịnweta eji egbochi ma na-agwọ obere magnesium n'ọbara. A na-ejikwa ụdị ụfọdụ agwọ ọrịa nke oke afọ afo dịka iwe iwe, obi mgbawa, na afọ mgbu nke acid.
Kedu ihe ị na-ekwesịghị iji magnesium?
Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ihe mgbakwunye magnesium dị mma, ị kwesịrị ịlele onye na-eweta ahụike gị tupu iwere ha - ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ ahụike. Ihe mgbakwunye mineral nwere ike ghara ịdị mma maka ndị na-ewere ụfọdụ ọgwụ diuretics, ọgwụ obi, ma ọ bụ ọgwụ nje.
Kedu mgbe ị na-ekwesịghị iri magnesium?
Lelee onye nlekọta ahụike gị ma ọ bụrụ na ị na-a anyụ ọgwụ ọ bụla tupu iwere magnesium. Ihe egwu. Ndị mmadụ na-arịa ọrịa shuga, ọrịa eriri afọ, ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa akụrụ ekwesịghị ịza magnesium tupu ha na ndị na-elekọta ahụike ha ekwurịta okwu.
Kedu ka m ga - esi mara ma ọ bụrụ na m dị ala na magnesium?
Otu n'ime ihe ịrịba ama mbụ nke ụkọ magnesium bụ mgbe ike ọgwụgwụ. May nwere ike ịhụ nkwarụ akwara, adịghị ike ma ọ bụ nkwesi ike. Enwe agụụ na ọgbụgbọ bụ ihe mgbaàmà ndị ọzọ na-amalite na mmalite. Agbanyeghị, ị gaghị ahụkwa ihe mgbaàmà ọ bụla na mbido.
Ogologo oge ole ka m ga-eji na magnesium tupu ị lakpuo ụra?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ihe mgbakwunye magnesium dị ka enyemaka ụra, anyị na-akwado ị were 1-2 awa tupu ị lakpuo ụra. Tụlee itinye magnesium na usoro ihi ụra gị.
Kedu vitamin ị na-ekwesịghị iri ọnụ?
Nnukwu mineral nwere ike ịsọ mpi na ibe ya ka ọ banye. Ejila calcium, zinc, ma ọ bụ magnesium mgbakwunye n'otu oge.
Magnesium L Threonate ọ dị mma maka nchekasị?
Mbugharị Magnesium L Threonate nwere ike ime ka ọnọdụ ka mma, nrụgide na-agwụ ike, na ibelata nchekasị. Ọzọkwa, akwụkwọ dị iche nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Pain Dọkịta chọpụtara na magnesium L-threonate na-egbochi ma weghachite ụkọ nchekwa ndị metụtara mgbu neuropathic na-adịghị ala ala.
Kedu ụdị magnesium kachasị dị mma?
Dị nke magnesium nke na-agbaze nke ọma na mmiri mmiri na-etinye obi gị dum na eriri afọ karịa ụdị obere edozi. Obere ihe omumu achoputala na magnesium di na aspartate, citrate, lactate, na chloride bu nke na etinye obi ha dum karia ihe kariri magnesium oxide na magnesium sulfate.
Enwere m ike iwe ogologo oge magnesium?
Ihe na-erughị 350 mg kwa ụbọchị dị mma maka ọtụtụ ndị okenye. Na ụfọdụ ndị, magnesium nwere ike ịkpata mgbakasị afọ, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, na mmetụta ndị ọzọ. Mgbe a na-ewere ya dị ukwuu (karịa 350 mg kwa ụbọchị), magnesium bụ POSSIBLY UNSAFE.
Kedu ka magnesium si emetụta ngagharị afọ?
Ugboro ole kwa ụbọchị ka ị ga-ewere magnesium?
Magnesium bụ ihe dị mkpa ịnweta nke metụtara ọtụtụ akụkụ nke ahụike gị. National Academy of Medicine na-atụ aro ka ị gafe karịa mg mg 350 nke mgbakwunye magnesium kwa ụbọchị. N'agbanyeghị ma ị na-ewere magnesium iji meziwanye ahụ gị n'oge ọ bụla n'ụbọchị, ọ bụrụhaala na ị nwere ike iji ha mgbe niile.
Kedu ụzọ kachasị mma iji nweta magnesium?
mbenata ma obu izere nri ndi nwere calcium n’azu awa abuo tupu mgbe irie nri ndi magnesium.
na-ezere ihe mgbakwunye zinc dị elu.
na-agwọ ụkọ vitamin D.
na -eri ahihia ndu karia isi nri.
ịkwụsị ị smokingụ sịga.
Kedu ihe kpatara anyị ji chọọ Magnesium L-Threonate?
Magnesium bụ mineral dị mkpa ma ahụ na-eji ya arụ ọrụ mmezi metabolic 300 dị iche iche. Ọ bụkwa ogo nke anọ n’ime ahụ mmadụ. Ahụ mmadụ na-eji magnesium maka nchịkwa ọbara mgbali, nsị akwara, nnyefe akwara na nrụpụta ume. Ebe magnesium bụ ụdị mineral dị oke mkpa, ụkọ ya nwere ike ibute ọrịa dị iche iche, gụnyere migraines, ọrịa shuga-type 2, nsogbu mgbanwe ọnọdụ obi na ọrịa obi dị iche iche. Ọ bụ ezie na enwere ike ịnweta ịnweta akụ a sitere n'ọtụtụ eke dị iche iche, gụnyere akwụkwọ nri, mkpụrụ, mkpụrụ na mkpo, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ụwa na-ata ahụhụ site na ụkọ ya. Ọ bụ ya mere na a na-adụkarị ndị mmadụ ọdụ ka ha rie magnesium n'ụdị mmeju. Otu mgbakwunye magnesium a nke meworo ka nnukwu ewu ewu na nso nso a bụ Magnesium L-threonate.
N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe niile mara maka Magnesium L-threonate na ihe kpatara ị ga-eji na-eri ya. Yabụ, gụkwuo.
Kedu ihe bụ Mmetụta Magnesium L-threonate?
Nchoputa gosiputara na Magnesium L-threonate bu nke oma ma nabatakwa ya nke oma mgbe ewere ya were ihe di obere karma mg mg ato. Agbanyeghị, ịba ụba Magnesium L-threonate nwere ike bute nsonaazụ, dị ka ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, wdg. Ọ bụrụ na ị na-enwe otu n'ime mgbaàmà ndị a, kpọtụrụ dọkịta ma ọ bụ belata ego ole ị doụrụ. Magnesium L-threonate, mgbe ewere ya na oke ego, na-abawanye magnesium na-arụ n'ime ahụ, nke na-eduga n'ọnọdụ ndị dị ka ọbara mgbali elu, mmụba obi, iku ume ngwa ngwa, wdg N'ihi ya, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ dọkịta gị tupu ịmalite site na Magnesium L-threonate emeju. Ọgwụ a dị mma maka ụmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye nwa yana ụmụaka aka mgbe a na-a inụ ha obere ọgwụ.
Kedu uru nke Magnesium L-threonate?
Ka anyị leba anya na ụfọdụ uru Magnesium L-threonate ma gbalịa ịghọta ihe kpatara isi iyi magnesium a ji enwe nnukwu ewu ewu.
① Magnesium L-threonate Na-alụ ọgụ ADHD n'ụzọ dị irè
Otu n'ime isi ihe kpatara ewu ewu nke Magnesium L-threonate bụ ikike ya iji melite ogo magnesium n'ime ụbụrụ. Ebe ọ bụ na anụ ahụ na-anabata nnu ngwa ngwa, ọ bụ ụzọ dị irè iji mee magnesium iru sel ụbụrụ. Magnesium na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịme ka ahụike ọgụgụ isi dị elu - ọ nwere ike ịgbanwe ihe mgbaàmà nke ịka nká, dị ka ADHD ma ọ bụ nsogbu mwepụ anya. Ebe ADHD bụ ọnọdụ na-ewe oge iji zụlite, ndị mmadụ anaghị achọpụta na ha nwere ADHD ruo mgbe ọ ruru isi site na ebe ọ na-esiri ike ịlụ. Ya mere, Magnesium L-threonate, na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ahụike ọgụgụ isi, ọkachasị n'ihe gbasara ndị agadi ma na-egbochi ADHD. (1). Anyanwụ, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
② Ọ Bụ Ihe Wonderful Memory and Cognitive-Enhancing Supplement
Mgbe ndị mmadụ tozuru oke, ụbụrụ ha na-amalite ịda nha. Nke a mere n'ihi ọnwụ nke synapses na nsonaazụ ọgbụgba metụtara afọ. Nnyocha nyocha emere n'ọtụtụ afọ egosila na Magnesium L-threonate na-eme ka ịdị ukwuu nke synapses dị na ụbụrụ pụta, nke na-eduga na ncheta nke ọma na ọrụ ọgụgụ isi. N'okwu dị mfe, magnesium nke Magnesium L-threonate na-enye nwere ike ịgbanwe ntụgharị ụbụrụ, yabụ kwalite ahụike ọgụgụ isi, ọkachasị ndị agadi.
③ Ọ Na - enyere Aka Fightlụso Obi ressionda Mbà na Nchegbu ọgụ
Obi erughị ala na nchegbu aghọọla nsogbu zuru ebe niile. Ọnọdụ nke ejighị ihe n'aka site na oria ojoo a bu COVID-19 mere ka nsogbu ndi a karie ugbu a. Nnyocha egosila ụfọdụ njikọ dị n'etiti magnesium na ịda mba na nchegbu. Ebe ọ bụ na magnesium na-emetụta sistemụ akwara, ọ nwere ike ime ka mmadụ nwee ahụ iru ala ma nwee ahụ iru ala. Ya mere, magnesium L-threonate nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa iji belata ma nkụda mmụọ na nchegbu.
Ọ na - eme Ka ọkpụkpụ na ahụ ike
A na - ejikọkwa ụkọ magnesium yana ọkpụkpụ na akwara na - esighi ike. Ya mere, ndị mmadụ na-arịa osteoporosis na-adụ ọdụ ka ha were Magnesium L-threonate ka ọ bụrụ mgbakwunye magnesium. Ọzọkwa, a na-adụ ọdụ nnu a ka ọ bụrụ ọgbụgba na-ebelata ọgwụ mgbu.
Magnesium L-Threonate na-enyere ndị mmadụ aka ihi ụra nke ọma
Ọtụtụ nnyocha e mere egosila na mmadụ ga-ehi ụra nke ọma na ọ ga-enwerịrị oke magnesium n’ahụ ya. Magnesium na-eme ka usoro ụjọ nke parasympathetic rụọ ọrụ, nke na-eme ka ahụ dum dị jụụ. Nke ka mkpa bụ na magnesium jikọtara ya na ndị nnabata GABA n'ime ahụ ma mee ka usoro ụjọ mmadụ dajụọ, si otú ahụ mee ka uche na ahụ nwee ahụ iru ala. Magnesium L-threonate na-eme ka enwere nnukwu magnesium n'ime ahụ iji hụ na abalị nke ezigbo ụra.
Ndị ọzọ karịa uru ndị a kpọtụrụ aha n'elu, a na-ejikwa Magnesium L-threonate maka ebumnuche ndị ọzọ. Enyere nnu a iji belata ihe mgbu mgbe ọ gbasachara ọrịa. A na-ejikwa ya iji belata ihe mgbu mgbu kpatara site na akwara ozi. N'ikpeazụ, a gosipụtakwala nnu a iji nye aka na ntị ịnụ ihe, fibromyalgia na ọrịa shuga. Peoplefọdụ ndị na-ewere ya belata ọkwa cholesterol ha.
Ebee ka m nwere ike ịzụta magnesium L Threonate?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịbanye n'ime mgbakwunye Magnesium L-threonate, ịchọrọ onye na-ebu ngwaahịa nwere ntụkwasị obi na ntụkwasị obi. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ebe ị ga-azụta Magnesium L-threonate ntụ ntụ n'ọtụtụ, zụọ ahịa na Cofttek. A maara ụlọ ọrụ ahụ n'ime ụlọ ọrụ biomedical maka nnwale nyocha ya na ike nyocha ya. Cofttek nwekwara ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na ndị ọrụ R&D nke klas mbụ na ndị ọkachamara si gburugburu ụwa.
E guzobere Cofttek na 2008 na n'ime afọ ole na ole, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara aha maka onwe ya n'ọtụtụ niche, gụnyere teknụzụ sịntetik, mmepe ọgwụ ọgwụ, bioengineering, kemistri ọgwụ, wdg. Taa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ahịa na North America, India , China na Europe na amụma ya nke 'Quality Basis, Customer First, Honest Service, Mutual Benefit' enyerela ya aka ịmepụta ndị ahịa nwere obi ụtọ gburugburu ụwa. Magnesium L-threonate nke ụlọ ọrụ ahụ nyere na-abịa na mkpọ nke 25 kgs na ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịtụkwasị obi maka ogo ya dị elu. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ Magnesium L-threonate ntụ ntụ na nnukwu, zụọ ahịa na cofttek.com.
Ekwesịrị ijikọta calcium na magnesium ọnụ ma ọ bụ iche iche?
Ebe ọ bụ na magnesium na-arụkọ ọrụ na calcium, ọ dị mkpa ịnwe oke kwesịrị ekwesị nke mineral maka ha ka ha rụọ ọrụ. Ọchịchị dị mma bụ 2: 1 calcium-to-magnesium ratio. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị were 1000mg nke calcium, ị ga-ewere 500mg nke magnesium.
(1). Anyanwụ, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Iwu nke njupụta nke synapse site na L-threonate site na mgbanwe nke ntinye nke magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Ọrụ nke Catalase (CAT), ALT na AST na Organs dị iche iche nke Switzerland Albino Mice Na-emeso Lead Acetate, Vitamin C na Magnesium-L-Threonate. Akwụkwọ akụkọ Clinical & Diagnostic Research, 11 (11).
(3). Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Ogologo oge magnesium-L-threonate na-eri nri na-agba ọsọ ọsọ ma na-ebelata mgbake nke ntụgharị ihu igwe. Usoro ọgwụ ọgwụ na ọgwụ na ọgwụ, 106, 16-26.
Na-eme ka m na-arịa ọrịa n’isi m. Ga-agba mbọ belata dose
Emeela m ncheta oge dị mkpirikpi na nke ogologo oge, m na-echekwa echiche karị n'ọtụtụ ụzọ. Enwekwara m obere nkwado dopamine na obere testosterone na-agbatị nke na-adịgide adịgide ma na-ebelata ntakịrị. Ra nwere ike imewanye nke ọma iji mee ka awa asaa dị ka 7 mana mag glycinate na-agbagha okwu ahụ maka m mana m ka kwụ n'azụ, ụfọdụ, mmelite ụra.
Magnesium L-threonate (MgT) bụ micronutrient dị irè maka imeziwanye ọrụ, nlebara anya na episodic ebe nchekwa, ọrụ ọgụgụ isi, na mbenata nrụgide na nchekasị.
Doctorsfọdụ ndị dọkịta na-atụ aro ịgbakwunye 2000 mg nke Magnesium iji lụso ịda mbà n'obi ọgụ.
Nke ahụ dị mma, ruo mgbe m ghọtara na Magnesium L-Threonate dị irè karị na ịbanye n'ime BBB (Ọbara, Brain, Ihe Mgbochi). Nke a tụrụ site na ọkwa Magnesium na mmiri mkpụrụedemede ụbụrụ. Ana m ewere ya maka ncheta na ịda mba.
Anyi! Enweghi ike ide ederede a karie! Ilele post a na-echetara m onye mụ na ya bi n’otu! Ọ nọgidere na-ekwusa banyere nke a. Aga m ebugharị ya post a. O doro anya na ọ ga-enwe nnukwu ọgụgụ. Daalụ maka ịkekọrịta!
Theonate na-enyere m aka ihi ụra nke ọma karị.
Anọ m na-ewere 600mg nke Alpha GPC, 300mg nke Uridine, na 2,000mg nke Mag L-Threonate dị ka ụra m na-ehi ụra n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Na-eme ka m nwee mmetụta nke ụra 10-25%. Ana m arahụ ụra ngwa ngwa karị ma m teta n'abalị.
ụlọ ọgwụ ịwa ahụ mmemme
Aka ọmụma. Enwere m obi ụtọ na achọtara m ebe nrụọrụ weebụ gị n'amaghị ama, enwere m ihe ijuanya ihe kpatara na mberede a emeghị na mbụ! Edere m ya akara.
Banyere Magnesium L-Threonate na-eji oge, 22% ụtụtụ na 11% n'abalị na-arụ ọrụ kacha mma.
Ọ bụrụ na m na-eme ọtụtụ mgbe ọ nwere ike ịbụ ihe na-egbochi mmụọ, ọ bụ nsonaazụ kachasị mma mgbe izu 2 gachara ma anaghị m enwe ike iji ya nwee ọganiihu maka naanị mmụba arụmọrụ na naanị ihe.
Ahụrụ m ọtụtụ ndị na-akọ akụkọ mmetụta dịka isi ọwụwa, ehighị ụra nke ọma, obere ume wdg.
Thiamine bụ cofactor maka magnesium, na nnukwu doses nke magnesium nwere ike belata thiamine, na vica-versa.
Gbalịa ị thiụ thiamine (B-1) na ma ọ bụ mgbe mgbakwunye magnesium gị, wee hụ ma ọ bụrụ na mmetụta ndị ọzọ na-aga n'ihu.
Ọ dị mma, mana ọ bụrụ na ị soro ha gaa obere. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ihi ụra na ịkwa ụra, mag threonate nwere ike ịme ka ọ ghara ịmalite na mbụ. Agaghị m ebido na mbido atụ aro na karama, nke bụ 1000 mg 2 awa tupu ị lakpuo maka izu mbụ. Dị ka nke a nwere ike ọ ga-abụ na ị na-a okirikiri n'ihi ntakịrị oge.
M na-1-2gs tupu ụra na ma eleghị anya, otu 500mg okpu ụtụtụ ma ọ bụrụ na m na-eche crappy.
Ọ dị mma na ị na-eche echiche site na edemede a yana site na mkparịta ụka anyị mere na ebe a.
Magnesium L-Threonate na-akpata nbata nke magnesium site na oghere ndị ọzọ gaa na oghere intracellular nke akwara ozi. Nke a anaghị eme na ndị ọzọ magnesium-salts.
Ọ nwere ike inye aka ịrahụ ụra ngwa ngwa karịa 1 awa tupu ị lakpuo ụra. Ihe mgbakwunye gị ga-achọ ọgwụ 3 ma ọ bụ 4 kwa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na magnesium threonate bụ nnukwu, akụkụ threonate nke molekul ahụ buru ibu. Kewaa ogwu ahu kwa ubochi iji bulie mmetuta gi ma o nwere ike dozie ya ka i rie nri karia nri gi.
ọla edo IRA
L-Threonate na-emetụta ụbụrụ kpọmkwem n'adịghị ka ụdị magnesium ndị ọzọ.
Dika o n’aga otutu otutu ihe n’etu ihe n’olu ụbụrụ ya nwere ike buru oge imeghari ya ya mere id nye ya oge.
Ihe dịịrị ihe niile, ọdịnaya dị na weebụsaịtị a bụ n'ezie ihe ịtụnanya maka ndị mmadụ, makana ndị ọrụ ibe gị.
Nara ụra ahụ na-akpali akpali n'elu ụra ehighị ụra ọ bụla ị nwere ike ịnweta. Naanị were ya n'ụtụtụ na obere usoro dị ala site ugbu a gaa n'ihu.
Ruo Mag-L-Threonate na-aga, nghọta m bụ na L-threonate bụ ụgbọ elu dị elu ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke magnesium banye n'ụbụrụ ebe ọ nwere ike iji ya mee ihe? A sị na ọmụmụ ihe egosila na nke a bụ eziokwu. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị mama ma ọ bụ na ọ bụ ezie. Ọ ga-akara m mma iji L-threonate ma ọ bụrụ na m ga-enweta ya n'ọtụtụ, ma ọ bụghị na m na-arapara n'ahụ chelate.
Eleghị anya 2 grams nke magnesium L-threonate, na-enye 144mg nke elemental magnesium.
Dị Threonate bụ ụbụrụ ụbụrụ akọwapụtara nke ọma yana ọ nwere ike ịdịkwu irè na iweli ọdịnaya magnesium ụbụrụ n'agbanyeghị na ọ nweghị ezigbo magnesium na ya.
Amalitere m ịmụrụ ngwaahịa Magnesium L-Threonate n'abalị tupu ị lakpuo ụra na wow - mgbe ụbọchị anọ ma ọ bụ ise gasịrị, amalitere m ịhụ obere ndozi na ncheta, njigide data dị iche iche na-arụ ọrụ, mgbe izu ole na ole gachara, ọganihu ka ukwuu ebe m nwere ike icheta aha na eziokwu site na afọ ndị gara aga. Tupu iwere nke a, agbasiri m ike icheta obere ihe na obere na ọ bụ ihe zuru oke ka m gwara PCP m ma hụkwa Neurologist onye chọpụtara na m nwere "mmetụ" mmetụ na-emezighị emezi na ọbụlagodi ka m mezue ọnụ ọgụgụ nke ule iji chịkwaa Alzheimer.
Ana m ewere ọgwụ a tụrụ aro nke capsules atọ nke na-enye 144 mg nke Magnesium L-Threonate kwa abalị. Nke a agbanweela ndụ m.
Otu ihe dị mma dị na nke a bụ na ọ dị mma ụra m na-echetakarị nrọ m ugbu a.
Anọ m na-a powderụ Magnesium L-Threonate ntụ ntụ maka ihe dịka ọnwa 10 ugbu a, 1.0 - 1.2g kwa ụbọchị. M na-eji ya dị ka ihe enyemaka ụra, ọ na-arụkwa ọrụ dị ebube. Enweghị m ike ịsị na ahụrụ m mmetụta ọ bụla na mpụga nke ahụ.
Magnesium L-threonate dị ịtụnanya. You nwere ike google aha ya nke Magtein. Ọ na-ekpopụ ụbụrụ foogu, na-ebelata nchekasị, na-enyere gị aka ihi ụra, na-eme ka ị mara ihe, ma na-enyere ịda mba aka. Nne na nna m nwere ike isi na mgbochi antidepressants site na ịgbanwe na Magtein. M na-eji ya kwa ụbọchị, ọ gaghị adị na-enweghị ya.
1g-2g otu awa tupu ụra. 500mg maka iji oge ụbọchị, ọ bụrụ na achọrọ maka nchekasị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ dakwasịrị gị ozugbo ọ kwụsịrị, nke pụtara na ọ bụghị ihe dị ukwuu maka ịmịpụta ihe mgbe ọ nọ na ya mana na ọ na-etinye uche gị ma na-enye ọgwụ ike na-emetụta ndị nabatara ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma mgbe Mg rụchara ya. Nke ahụ ọ nwere ezi uche? Ọ bụ ya mere tupu ị lakpuo ụra dị oke mma, mee ka ị teta mgbe inyela uche gị ezumike. Mmetụta ya na-agbakọta, mana ịma mma, enwere m mmetụta dị iche n'ụtụtụ ahụ mgbe mbụ m were ya, n'ezie.
Ọtụtụ magnesium ga-eme ka stool na-adịghị ọcha. Maka ọtụtụ n'ime anyị, nke ahụ karịrị 200 mg kwa ụbọchị. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnagide ihe karịrị 500 mg nke magnesium na-enweghị nsogbu.
Ngwadogwu a tụrụ aro ka m bụrụ 144 mg nke elemental (ọcha) magnesium kwa ụbọchị. Fọdụ ndị na-ero obere ụra na mbido, ndị ọzọ na-achọpụta mmụba nke mmụba ọbara na isi, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta isi ọwụwa. T Ọ bụrụ na ị na-ewere magnesium maka afọ ntachi, ịnwere ike ịnwale ịnwa ọgwụ gị ugbu a ka ị na-agbakwunye Mg Threonate.
Ọ bụrụ n ’ịzụlite stool rụrụ arụ, belata ụdị Mg mbụ gị.
Enwere m olileanya inyere gị aka!
Magnesium L-Threonate - gini bụ ahụmahụ gị?
Ọ dị onye nọ ebe a na-ewere Magnesium L-Threonate dị ka mgbakwunye? Gịnị bụworo gị ahụmahụ?
Ogologo oge ole ka ị na-ewere ya na ole?
Kedu ka ọ dị tupu ịmalite ịmụrụ ya, mgbe ị nọ na ya, na mgbe ịkwụsị ị takingụ ya ma ọ bụrụ na ị didụrụ ya?
Echere m na ndị nchịkwa nke saịtị a na-arụsi ọrụ ike n'ịkwado ebe nrụọrụ weebụ ya, n'ihi na ebe a ihe ọ bụla bụ data dabere na data.
Achọpụtara m na Magnesium L-threonate bụ ihe na-atọ ọchị ma na-elekwasị anya na mmetụta uche, ebe glycinate bụ nke izu ike ahụ.
M kwesịrị ịgbalị ma n'echiche m.
E gosipụtara Threonate dị na ya amino-acid ka ọ rụọ ọrụ dị ka onye na-egbochi Acetylcholinesterase. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke ọma ma hụ ọnọdụ dara mbà n'obi ma ọ bụ nsogbu ọ bụla sitere na mgbakwunye dị ka Huperzine A, Alpha GPC, mega-doses nke mmanụ azụ, m ga-eme ihere Mag Glycinate.
N'ihi ụgwọ, akwụsịrị m ịnwale magnesium l-threonate maka ọtụtụ afọ.
ma n'ihi na m, Ọ mma ụra m, isi ihe bụ na larịị nke udo m nwere ike nweta ụbọchị mgbe ewere ya unmatched.
Enwetụbeghị m ụdị ọnọdụ / nchegbu ọ bụla sitere n'ụdị magnesium ndị ọzọ dị ka glycinate, mana n'onwe m ka m si enweta ha site na l-threonate.
Magnesium L-threonate nwere ike ịbụ ezigbo ụdị magnesium maka gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwalite ahụike ụbụrụ ọkachasị.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike n'ozuzu ya na-akwalite ogo magnesium n'ime ahụ niile, mmetụta nwere ike ịdị ike karịa n'ụbụrụ.
Ihe a na-arụ ọrụ, ọkachasị maka oge ihi ụra na ogo.
Agbalịrị m ụdị Mg ndị ọzọ ma ha na-enye m ọsọ ahụ.
Ewepụla m Melatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, ọ dịghị onye na-arụ ọrụ oge niile na n'ụzọ dị irè dịka L-Threonate nke Mg.
Ahụmahụ Magnesium L-Threonate?
M zụrụ ụfọdụ Magnesium L-Threonate n'oge na-adịbeghị anya na enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nnukwu ahụmahụ na ya. Enweghi nchekasị, obere ụbụrụ ụfụ, enwere m mmetụta dịka 'onwe m' n'echiche, wdg. Ana m etinye aka na 1-1.5g nke a kwa ụbọchị.
M na-eche ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụdị ahụmahụ ma ọ bụ dị iche iche n’ụdị Magnesium a?
Magnesium L-Threonate na-eme ka ahụ ruo m ala ma nyere m aka ihi ụra.
Mepee LABEL ọnwụnwa nke MAGNESIUM L-THREONATE NA Ndị ọrịa na-arịa ọrịa
Na United States, enwere ihe dị ka nde ọrịa 5.2 nke ọrịa Alzheimer (AD), yana AD na nsogbu ndị ọzọ na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 n'ime ndị okenye 3. Site na ibu ego na mmetụta uche nke nlekọta ahụike, ịchọta ọgwụgwọ dị mma ma dị mkpa dị mkpa. Nnyocha na-apụta na mmetụta uche nke Magnesium L-Threonate (MGT) na-egosi na mgbakwunye nwere ike ịbara ndị mmadụ uru AD. Agbanyeghi oke, anụmanụ dị ugbu a na nnwale nnwale nnabata mmadụ gbasara nsonaazụ na nsonaazụ mgbe MGT gbakwunyere, nkọwa ịkọwapụta nke mmetụta MGT amalitela ịpụta, gụnyere nchịkwa nke ụzọ mgbapụ NMDAR. Ihe nyocha a na-emeghe ugbu a na-enyocha nsonaazụ nke MGT n'iji ndị ọrịa nwere nsogbu nro. Ndị ọrịa iri na ise nwere nyocha 18F-FDG-PET, nyocha ihe ọmụma, na ọbara na-adọta na ntọala na izu iri na abụọ nke ọgwụgwọ iji chọpụta mmetụta dị ukwuu nke mgbakwunye MGT na hippocampal na cortex prefrontal na-echekwa ikike nghọta gụnyere ọrụ njikwa, nlebara anya, ọsọ ọsọ , okwu were were na ncheta. Emere ihe nyocha na mmịnye ọbara mgbe izu 12 nke nkwụsị MGT gasịrị. Nchọpụta gosipụtara mmụba dị ịrịba ama na mpaghara ọrịa ụbụrụ nke mpaghara yana mmelite na nchịkọta zuru ụwa ọnụ nke ịmị ezi uche na-arụ ọrụ na ngụkọta nchịkọta mgbe izu 8 nke ọgwụgwọ MGT. Ejikọtara ọkwa ọbara magnesium ọbara ọbara na-arịwanye elu na mmụba nke cognition na arụ ọrụ zuru oke na ụfọdụ ma ọ bụghị ndị ọrịa niile. Nnukwu ule a na-achịkwa ebe a na-achịkwa ọgwụ na-akwado iji nyochaa MGT dị ka mgbakwunye dị irè, dị mfe ịnweta, na ego ọnụ maka ndị nwere AD.
Nrụpụta ọrụ na nchekwa nke MMFS-01, Synapse Density Enhancer, maka inggwọ Mmetụta Mmetụta na Ndị Agadi Agadi: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial。
Ọ bụ nsogbu na-enweghị nsogbu ịchọpụta ihe ọ bụla dị na net ma e jiri ya tụnyere akwụkwọ, dịka m chọtara isiokwu a na saịtị weebụ a.
Egwu! Ya n'ezie ịtụnanya isiokwu, M nwere ọtụtụ doro anya echiche banyere site n'isiokwu a.
Magtein (L-threonate) osdị onunu ogwu？
Ndewo, a na m eche maka ndị jiri Magtein ma ọ bụ L-threonate n'oge gara aga, kedụ ihe eji eme ha kwa ụbọchị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha agbagharị n'etiti ụdị magnesium ndị ọzọ.
Ugbu a, ana m ewere 3600mg nke glycinate kwa ụbọchị (1800mg n'ụtụtụ, 1800mg n'abalị). Dị ka akara ahụ si dị, nke ahụ karịrị 100% kwa ụbọchị nke magnesium, mana nke ahụ bụ ọgwụ m na-eche nke ọma, ebe ọ na-ewepụ ọtụtụ nrịanrịa na akwara.
Anọ m na-eche, ebe ọ bụ na 2000mg nke Magtein bụ naanị 36% uru magnesium kwa ụbọchị, yana 2000mg Magtein bụ MAXIMUM akwadoro kwa ụbọchị, ọ ga-ekwe omume ịnweta magnesium zuru oke site na L-threonate, ma ọ bụ ndị mmadụ na-eji ụdị magnesium ndị ọzọ adianade L-threonate, mgbe ị na-ewere L-threonate?
Daalụ maka enyemaka. Oge izizi na-anwa L-threonate maka m.
Anọ m na-ewere ntụ ntụ nke Magnesium L-Threonate nke ND maka ọnwa 10 ugbu a, 1.0 - 1.2g kwa ụbọchị. M na-eji ya dị ka ihe enyemaka ụra, ọ na-arụkwa ọrụ dị ebube. Enweghị m ike ịsị na ahụrụ m mmetụta ọ bụla na mpụga nke ahụ.
Isi Iyi Naturals Magnesium L Threonate? Magnesium L Theronate bụ patented ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo Mag. Ọ ga-abụ otu usoro ahụ na-elegharaghị ika na-ere ya anya.
Magnesium l nkechi?
Dị ka m maara, l-threonate bụ ụdị nke na-akwalite nhụjuanya maka nghọta na ilekwasị anya. Glycinate maka ahụ ike erughị ala / cramps na ọbara mgbali ụkpụrụ. Citrate maka ịdị jụụ ma nwee ike inyere aka mgbe niile.
M ga-enweta akwụkwọ maka mgbaàmà ndị ị kọwara.
Magnesium bụ ihe dị mkpa electrolyte na ahụ gị yabụ were ya nọrọ ebe ahụ kwa ụbọchị.